“Waxaan rajeynayay in Cristiano Ronaldo uu ….” – Lionel Messi - Hargeele - Wararka Somali State
“Waxaan rajeynayay in Cristiano Ronaldo uu ….” – Lionel Messi
(Barcelona) 09 Okt 2019. Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay dhowr arrimood muhiim ah uu qeyb ka yahay Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi ayaa ka aragti dhiibtay ka tigistii Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus, kaddib markii uu ku biiray naadiga Juventus suuqii xagaaga ee 2018.
Messi ayaa wareysi uu siiyay “Catalunya Ràdio” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Waxaan rajeenayay in Cristiano Ronaldo uu sii joogi doono kooxda Real Madrid iyo horyaalka La Liga, sababtoo ah joogitaankiisa waxay bixineysaa qaab ciyaareed ku saleysan tartan, gaar ahaan kulanka El Clásico”.
Intaas kaddib Lionel Messi ayaa la weydiiyay su’aal ah Real Madrid miyey saameyn ku yeelatay bixitaankii Cristiano Ronaldo? Wuxuuna ku jawaabay:
“Horaan u sheegay sanadkii hore, waxaan qabaa inay dareemeen saameynta bixitaankiisa”.
“Waxaan weli aaminsanahay in Real Madrid ay heysato ciyaartoy wax walba ku soo bandhigi kara kooxda, sidoo kale xilli ciyaareedkan waxaay ku guuleysteen inay keensadaan ciyaartoy aad u wanaagsan”.
Berbatov oo soo jeediyay xal uu aaminsan yahay in lagu yareen karo loolanka u dhexeeya Ronaldo iyo Messi
Kaddib burburintii Taalladii Zlatan Ibrahimovic. tii Sanchez oo sidoo kale la waxyeeleeyay…+SAWIRRO
Tababare Solskjær oo shaaca ka qaaday mudada uu Pogba ka sii maqnaan karo garoomada
Kooxda Manchester United oo magacaabanaysa agaasime cusub oo kubadda cagta ah